अधिकमास अर्थात मलमास किन हुन्छ ? - USNEPALNEWS.COM
- सुनिल उलक प्रकाशित मिति: October 8, 2020
अधिकमासको बारेमा केहि बुझ्नु अघी क्यालेण्डरको इतिहास बुझ्नु पर्ने हुन्छ । सन १५७७ मा पोप ग्रेगरी तेह्रौले जुलियस सिजरको समयबाट शुरु गरिएको जुलियन क्यालेण्डरमा दिन, महिना, तथा वर्षमा भएको कमि कमजोरीलाई सुधार गर्न खगोशशास्त्री क्रिस्टोफर क्लाविस तथा भौतिक विज्ञानी अलासियस लिलियसलाई जिम्मा दिइएको थियो ।
पाँच वर्ष लगाएर ति दुइले हिसावकिताव गरेर पोपलाई प्रस्ताव दिए । पोप ग्रेगरी तेह्रौले सो सुझाव कार्यान्वयन गर्दै सन १५८२ को फेब्रुवरी २४ मा नयाँ क्यालेण्डर बनाए । सो भन्दा अगाडी मार्च २५ मा मनाउँदै आएको नयाँ वर्षलाई सन १५८३ बाट जनवरी १ लाई नयाँ वर्ष मनाउने घोषणा गरे । साथै सो समयसम्म नमिलेको १० दिनलाई मिलाउन पनि सन १५८२ को अक्टोवर महिनामा ४ अक्टोवरको भोलिपल्ट १५ अक्टोवर बनाएर मिलाए ।
यि दुइको सल्लाहबाट हरेक चार वर्षमा एक दिन फेब्रुवरी महिनामा थप हुने तथा वर्ष ३६५ दिनको हुने बनाइयो । साथै हरेक सय वर्षमा फेब्रुवरी २९ दिनको नभइ २८ दिनकै हुने पनि हिसाव गरियो । तर हरेक ४०० वर्षमा भने फेब्रुवरी २९ दिनकै रहने भयो । यसरी गणना गर्दा हरेक ३२०० वर्षमा अझै १ दिन बढी आउने भए पछि सन ३२०० को फेब्रुवरीलाई भने ३० दिनको बनाउनु पर्ने सुझाव पनि दिएका थिए । यसरी तैयार भएको नयाँ क्यालेण्डरलाई ग्रेगरियन क्यालेण्डर भन्न थालियो ।
तर यो क्याथोलिकहरुको निर्णय भन्दै सबै देशले एकसाथ स्विकार गरेनन् । प्रोटेस्टान्टहरुले आफ्नै किसिमले सुधारको प्रयास गरे । जसको फलस्वरुप बिभिन्न देशले आफ्नै किसिमले क्यालेण्डर सच्याउदै ग्रेगरियन क्यालेण्डरलाई स्विकार गरे । ब्रिटेन तथा यसका साम्राज्यहरुले १७५२ मा ११ दिन घटाएर ग्रेगरियन क्यालेण्डरलाई स्विकारेका थिए । तसर्थ सेप्टेम्बरको २ को भोलिपल्ट १४ तारिख भएको थियो ।
फ्रान्सले सोही वर्ष ९ डिसेम्वरको भोलिपल्ट २० डिसेम्वर बनायो । पोलाण्डले सन १६१२ मा २२ अगष्टको भोलिपल्टलाई २ सेप्टेम्वर बनायो । डेनमार्क तथा नर्वेले सन १७०० मा फेब्रुवरी १८ को भोलिपल्ट मार्च १ बनायो । अमेरिकाले सन १८६७ को ७ अक्टोवरको दिउसो १२ बजे पछि १८ अक्टोवर बनायो । सोवियत संघले ग्रेगरियन क्यालेण्डरलाई स्विकार्दै सन १९१८ मा फेब्रुवरी १ को भोलिपल्ट फेब्रुवरी १४ तारिख बनाएको थियो ।
यसरी यूरोपियन तथा अमेरिकाले स्विकारेको ग्रेगरियन क्यालेण्डरलाई ब्रिटिस साम्राज्यमा नरहेको एशियाली मुलुकले पनि बिस्तारै स्विकारेको थियो । जापानले सन १८७३ मा स्विकारेको थियो भने कोरियाले १८९५ मा स्विकारेको थियो । चीनले सन १९१२ बाट स्विकार गरेको थियो ।
यसरी ग्रेगरियन क्यालेण्डर विश्वाब्यापी भएर सबैतिर स्विकार भए पनि हिन्दु शास्त्र अनुसार भने चन्द्रमास र चन्द्रवर्षले नै हाम्रो पात्रो चलिरहेको छ । हाम्रो शास्त्रमा आफ्नै ब्याख्या छ । जसले हरेक दिन महिना वा वर्षमा यसलाई सुधारिरहेको हुन्छ । हिन्दु पात्र अनुसारको चन्द्रमासमा समय समयमा पुरुषोत्तम मास वा अधिक मासको रुपमा महिना थप गरेर सौर्यमण्डलमा लगाइएको चक्करलाई समायोजन गरिन्छ ।
सूर्य वर्ष ३६५ दिन ६ घण्टाको हुने तर हिन्दु पात्रो अनुसार चन्द्र वर्ष भने ३५४ दिनको हुने हुँदा हरेक तीन वर्षमा एक महिना अधिक बन्न जान्छ । जसलाई अधिक मास भनिन्छ । यसलाई मलमास पनि भनिन्छ । मलमासलाई राम्रोको रुपमा पनि हेरिन्छ भने कतिपय राम्रो कामलाई यस महिनामा गर्न अशुभ हुने भनिन्छ । बिबाहको साथै कतिपय धर्मसंस्कारहरु मलमासमा गरिदैन ।
यस वर्ष पनि मलमास परेको छ र चन्द्रमासको असोजको परेवा तिथी देखि मलमासको शुरुवात भएको छ । जसले गर्दा यस वर्षको दशै एक महिना पछाडी परेको छ । साथै अन्य पर्वहरु पनि एक महिना पछाडी धकेलिन पुगेको छ ।
नेपालमा बिक्रम सम्वतलाई राष्ट्रिय रुपमा चन्द्रशम्शेरको समयमा बि.सं. १९६१ मा सुधारिएको थियो । तसर्थ यहाँ सुधारिएको ग्रेगरियन क्यालेण्डरलाई आधार मानिसकेको हुँदा यहाँ कुनै सुधारको आबश्यकता मानिएन ।
तर पञ्चाङ्ग निर्धारण समितिले पर्व सुधारको सुझावको साथै हामी २६ दिन पछाडी रहेको हुँदा हाम्रो नेपाली क्यालेण्डरमा एक महिना घटाउन सुझाव दिएको पनि १० वर्ष भन्दा बढी भईसकेको छ । थाहा छैन कुन वर्ष कुन सरकारको पालामा हाम्रो बिक्रम सम्वतको क्यालेण्डरबाट पनि चैत्र महिना नै गायव हुनेछ ।
अधिकारीबाट प्रेरणा लिऔँ : अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’